दासढुङ्गा दुर्घटना*काण्ड मदन भण्डारी ‘रहस्यमय मृ*त्यु’ का एक मात्र साक्षी अमर लामा किन मारिए ! – Complete Nepali News Portal
दासढुङ्गा दुर्घटना*काण्ड मदन भण्डारी ‘रहस्यमय मृ*त्यु’ का एक मात्र साक्षी अमर लामा किन मारिए !
रिपोर्टर्स नेपाल, ३ जेठ । आजभन्दा २७ वर्ष अघि २०५० जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमयी जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो । उनको मृत्युलाई तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले हत्याकाण्ड भने । यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीपका चालक अमर लामा घटनामा बाँच्न सफल भएका थिए । उनलाई जेल पनि हालियो । तर, घटनाको रहस्य खुल्न सकेन । घटनाका एकमात्र साक्षी अमर लामा पनि मारिए । उनको हत्या रहस्यम भयो । हत्यामा संलग्नहरु पक्राउ पर्नु त कता हो कता पहिचान समेत हुन सकेन । यसले झनै घटनालाई रहस्मय बनायो ।
‘अमर दाइ ! नमस्ते’ भन्दै तीन जना अपरिचित युवकहरू ताजा खबर साप्ताहिकको कार्यालयभित्र पसेका थिए । कार्यलयमा सो पत्रिकाका सम्पादक फणिन्द्र दाहाल, अतिथि सम्पादक ईश्वरी वाग्ले र संवाददाता ज्ञानप्रसाद पौडेल भोलिपल्ट ( सोमबार ) निस्किने अखबारको तयारीमा व्यस्त थिए । पाँच मिनेटअघि मात्र ‘जनआवाज’ नामक आफ्नो स्तम्भका लागि लेख लिएर आइपुगेका प्रबन्ध सम्पादक अमर लामालाई अप्रत्यासित रूपमा आइपुगेका ती अपरिचितहरूले ‘दाई’ भनेर सम्बोधन गर्दै ‘नमस्ते’ भनी अँगालो हालेर कार्यालयबाहिर निकाले ।
वि.सं. २०५० जेठ ३ गते नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख क्रमशः मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप सहस्यमय ढंगबाट दुर्घनाग्रस्त भएपश्चात् नेताद्वयको मृत्यु भएको थियो भने सो जीपका ड्राइभर अमर लामा जीवित रहेका थिए । मदन–आश्रितको हत्याको आरोप लागेका लामा चार वर्ष जेलजीवन बिताएर निस्केका थिए ।
लामा मारिएको भोलिपल्ट अर्थात् २०६० साउन १३ गते सोमबार बिहानै अमर लामाको अपहरणमा प्रयोग गरिएको ट्याक्सी बा १ ज २५६० का चालक दाताराम अधिकारी ट्याक्सीसहित आफैं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उपस्थित भएका थिए । आश्चर्य, यस्ता अपराधमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन प्रायः घटनापश्चात् गायव हुने गर्छन् तर लामाको अपहरणमा प्रयोग भएको ट्याक्सी प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न आफै आइपुग्यो । रिपोर्टर्स नेपाल बाट(ब्रदर्श बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक नेपालका चर्चित हत्याकाण्डबाट)